Amakhasi Omshado - Konke odinga ukukwazi | Bezzia
Amakhasi Omshado: Konke odinga ukukwazi!
USusana godoy | 05/05/2022 16:00 | Umshado
Siyazi ukuthi emshadweni kufanele ubophe izinto eziningi ukuze ekugcineni, sibe nosuku lwamaphupho. Ngenxa yalesi sizathu, elinye lamaphuzu abalulekile okufanele licatshangelwe amakhasi omshado. Kuyiqiniso ukuthi akubonwa yonke imishado. Nakuba uma befika, bafika ngobumnandi nokwangempela ngosuku olukhethekile.
Ngakho-ke, uma ucabanga ukuthatha imincintiswano yomshado, kungase kudingeke uqale ekuqaleni futhi ucabange iyini imisebenzi yabo (njengoba bengaba nengaphezu kowodwa), yini abazoyiphatha ezandleni zabo, kufanele bangene nini nokunye okuningi. Ngakho-ke, ungalahlekelwa imininingwane futhi ngokuqinisekile, ngemva kokwazi konke okudingayo, uzozikhethela.
1 athini amakhasi
2 Ikhasi ligqoka kanjani?
3 Iyini imisebenzi yamakhasi
4 Iminyaka yamakhasi omshado
Amakhasi omshado yilabo bantwana abangabalingisi bodwendwe lomshado. Ngakho omunye wemisebenzi yawo, njengoba sizobona kamuva, uyoba ukuphelezela umakoti nomkhwenyana. Kodwa kuyiqiniso ukuthi nazo zinencazelo nokuthi izindima zabo aziyona into entsha kodwa kufanele sibuyele eRoma lasendulo. Kuye, kwaqhamuka amantombazane amancane anikela kumakoti nomkhwenyana kokubili izimbali nokolweni. Zombili izinketho zazibhekwa njengophawu lokuchuma kanye nokuzala. Kancane kancane, abafana namantombazane balunikeza ukuphila udwendwe ukuze kube nenhlanhla ngasohlangothini lwabashadikazi.
Ikhasi ligqoka kanjani?
Iqiniso liwukuthi kunezitayela eziningi zokugqoka. Phakade ungakhetha kancane kuye ngokuthi ingqikithi yomshado. Kodwa iqiniso liwukuthi, njengomthetho ovamile, amantombazane agqoka izingubo ezinemibala ekhanyayo njengomhlophe noma i-ecru. Ihambisana nezicathulo zohlobo lwe-ballerina kanye nezimbali noma iminsalo ezinweleni zazo. Nakuba abafana bengakwazi ukugqoka ihembe ne-vest, kanye namasudi kanye ne-bow tie, uma ufuna umshado wakho ube nesitayela esiyinkimbinkimbi kakhulu. Kodwa njengoba sisho, ungathathwa yisitayela esivamile esizoba nethezeka kakhulu kubo.
Iyini imisebenzi yamakhasi
Zingaba nemisebenzi eminingana, njengoba sithuthuke ngaphambili. Abanye basuke bephethe ukufika lapho umkhwenyana eselindile bafike nebhodi elibika ngokufika kukamakoti. Kungaba ibinzana elihlakaniphile noma cha, kodwa lizololongwa libe yisixwayiso esilula. Ngaphambi nje kokufika komlobokazi, amantombazane azovela namabhasikidi namacembe ezimbali, azowashiya.. Futhi, amanye amakhasi omshado angagqoka imifelandawonye futhi ame nhlangothi zombili, eduze komakoti nomkhwenyana. Ekugcineni, ngemva komlobokazi, kungase kuvele amanye amakhasi anomsebenzi wokumbeka ingubo, inqobo nje uma eyidinga.
Iminyaka yamakhasi omshado
Kulokhu, iminyaka nayo ibalulekile. Ngoba kunconywa ukuthi babe ngaphezu kweminyaka engu-3 ubudala futhi bangaphansi kwe-8. Ngaphezu kwanoma yini ngoba abancane kakhulu bazokhathala ngokushesha futhi ngeke bafeze umsebenzi ohambisana nawo. Ngokufanayo, lapho sebekhulile bangase bangafuni ukuba yingxenye yomshado. Ngakho-ke, phakathi kweminyaka emi-3 nengu-8 ubudala kubhekwa iminyaka ekahle okufanele icatshangelwe. Ngokuqinisekile nabo kanye nabo, umshado uzoba owokuqala kakhulu. Uma unekhasi elilodwa kuphela, leli kungaba yilona elizophatha izindandatho. Uma unomlingani, kungase kube nina nobabili eninakekela imifelandawonye. Nakuba lingekho inani eliqondile lamakhasi omshado, kuyiqiniso ukuthi kuyatuswa futhi ukuba angabi ngaphezu kuka-6. Ngokuqinisekile, phakathi kwamalungu omkhaya wakho nezingane zabangane abathile, uyokwazi ukujabulela lokho kuthinta okukhethekile njalo. ngomshado wakho!!
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » Indlela yokuphila » Umshado » Amakhasi Omshado: Konke odinga ukukwazi!
Okufanele ukwenze uma ungasaluzwa uthando ngomlingani wakho
Amaqhinga ezinto zikagesi ukuze zifane nomhlobiso